Abazali Bam Abandithembi | Abafikisayo
Ndinokwenza Njani Ukuze Abazali Bam Bandithembe?
Khawucinge ngale nto: Ngaba indlela ozenza ngayo izinto ibangela ukuba abazali bakho bangakuthembi?
Ngokomzekelo, umpostile uPawulos wabhala: “Sinqwenela ukuziphatha ngokunyaniseka kwizinto zonke.” (Hebhere 13:18) Zibuze, ‘Yintoni abayaziyo ngam abazali bam xa kufuneka ndibaxelele indawo endikuyo nezinto endizenzayo?’
Khetha igama kwaba bantu bangezantsi babalisa izinto ezenzekileyo.
ULori UBeverly ULori
“Ndandithumelela enye inkwenkwe iie-mail ndingafuni ukuba abazali bam bazi. Bandibhaqa baza bathi mandiyiyeke le nto ndiyenzayo. Ndathi ndiza kuyeka, kodwa andizange ndiyeke. Ndaqhubeka ndikwenza oku kangangonyaka. Ndandithumela ie-mail, abazali bandibhaqe, ndicele uxolo ndithembise ukuba andizi kuphinda, kodwa ndiphinde. Loo nto yabangela ukuba abazali bam bangandithembi kwinto yonke endiyenzayo!”
Ucinga ukuba yintoni eyabangela ukuba abazali bakaLori bangaphindi bamthembe?
Ukuba wawungumzali kaLori, wawuza kwenza ntoni, yaye kutheni wawuza kwenza njalo?
ULori wayemele ukuba wenze ntoni emva kokuba abazali bakhe bethethe naye ngale ngxaki kwasekuqaleni?
“Abazali bam babengandithembi emakhwenkweni, kodwa xa kungoku ndiyasiqonda isizathu. Ndandidlala ngamakhwenkwe amaninzi andishiya ngeminyaka emibini. Ndandihlala efowunini ndincokola nawo, yaye xa kukho nantoni na esidibanisayo ndandincokola nawo kuphela. Abazali bam bayithatha ifowuni yamkangangenyanga, yaye babengavumi ndiye kwiindawo ezinaloo makhwenkwe.”
Ukuba wawungumzali kaBeverly, wawuza kwenza ntoni, yaye kutheni wawuza kwenza njalo?
Ucinga ukuba abazali bakaBeverly bambekela imiqathango engafanelekanga? Ukuba uthi ewe, kutheni?
Yintoni awayefanele ukuba uyenzile uBeverly ukuze abazali bakhe bamthembe?
Ukusuka ebuntwaneni usiba ngumntu omdala onokuthenjwa kufana nokunyuka isteps, unyuka istep ngasinye ude ube mdala
Okokuqala, cinga ngento ekwenze awathenjwa.
Ukugcina ixesha endimele ndibe sekhaya ngalo
Ukwenza izinto endithe ndiza kuzenza
Ukugqiba imisebenzi yasekhaya
Ukuvuka ngaphandle kokucengwa
Igumbi lam lihlale licocekile
Ukusebenzisa ifowuni okanye ikhompyutha ngendlela efanelekileyo
Ukuvuma xa wenze impazamo ucele uxolo
Okwesibini, zimisele. Zibekele usukelo lokunyaniseka kwizinto ozichazileyo. Landela oku kuthethwa yiBhayibhile: “Nibulahle ubuntu obudala obuvisisana nehambo yenu yangaphambili.” (Efese 4:22) Ekuhambeni kwexesha, wonke umntu, nditsho nkqu nabazali bakho, baya kuyibona imizamo oyenzayo.—1 Timoti 4:15.
Okwesithathu, xelela abazali bakho into ozimisele ukuyenza. Kunokuba ukhalazele ukuba abakuthembi, bacele kakuhle ukuba bakuxelele into ofanele uyenze ukuze bakuthembe.
Isilumkiso: Sukulindela ukuba baza kusuka bakuthembe ngokuqhwanyaza kweliso. Baza kufuna ukuqiniseka ukuba uyakwenza oko ubathembise kona. Ngeli thuba yenza zonke izinto ezinokubangela ukuba bakuthembe. Ekuhambeni kwexesha, abazali bakho baya kukuthemba baze bakwenze ukhululeke. Kwaba njalo ngoBeverly, ekuthethwe ngaye ngasentla. Uthi: “Kunzima ukwenza izinto eziza kubangela ukuba uthenjwe kodwa kulula ukungathenjwa,” wongezelela ngelithi, “Ngoku abazali bam bandithembile yaye loo nto iyandonwabisa!”
Eyona nto ibalulekileyo: Xa usenza izinto ngokuthembeka, nabantu baza kukuthemba.